Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Khamriga & Ruuxa » Xaraashka Khamriga Barolo: €600,000 ee Barolo ee foostada
Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • kariska • dhaqanka • Faallo • Jarmalka Jebinta Wararka • Warshadaha Warshadaha • Italy War Deg Deg Ah • News • Switzerland War Deg Deg Ah • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka UK • Wararka Mareykanka • Khamriga & Ruuxa
Xaraashka Khamriga Barolo
Mararka qaarkood dhacdo waa dhacdo kaliya, mararka qaarkoodna (marka aan nasiib yeesho) dhacdadu waxay isu beddeshaa waayo-aragnimo galabnimo sabti ah oo cajiib ah oo ku wanaagsan in la sameeyo wanaag.
Dhowaan, waxaa la igu casuumay Barolo en primeur ee Il Gattopardo (oo leh sawir-gacmeedka Zoom ee Grinzane Cavor Castle ee Piedmont, Italy). Munaasabadda ayaa sidoo kale laga daawaday Jarmalka, Switzerland, iyo UK, iyadoo lala kaashanayo Langhe Monferrato Roero Tourist Board. En Primeur waa nidaam iibsi oo caan ka ah Bordeaux halkaas oo khamriga lagu iibiyo oo la iibsadaa inta ay weli da'doodu ku jirto foosto oo loo geeyaa iibsadaha dhammaadka habka (qaabka iibka maaha mid caan ka ah Gironde ka baxsan).
Munaasabadda ayaa siisay kuwa khamriga qaada fursad aan horay loo arag si ay uga qaybqaataan hindise samafal oo ay ka faa'iideysan doonaan hay'adaha samafalka iyo sidoo kale kuwa khamriga qaada. Shirkadaha ugu sarreeya ee barriques ee Barolo (2020 guridda) qayb gaar ah oo ku dhex taal beer canab ah oo taariikhi ah ayaa laga helay khamriga iyo xuquuqda faanka ee la xidhiidha.
Ujeedada kale waxay ahayd in la muujiyo kakanaanta walxaha kala duwan ee ka kooban taariikhiga ah ee Gustava Vineyard (ilaa hadda khamriga looma qasin sidii nooc madax-bannaan). Qandaraasleyda ugu sareysa waxay ku guuleysteen barrique khamri ah oo laga sameeyay canabka Barolo Nebbiolo, oo la goostay 2020, gudaha Cascina Gustava Vineyard, Frinzane. Marka khamrigu dhamaystiro habsocodkiisa gabowga (2024) barrique kastaa waxa uu soo saari doona ku dhawaad ​​300 dhalo, kuwaas oo dhalo lagu shubi doono laguna calaamadin doono calaamad uu si gaar ah u sameeyay fanaanka Giuseppe Penone. Suuqa la beegsanayo ee xaraashka? Khabiirada dhamaadka-sare, oo ay ku jiraan kuwa khamriga qaada, iibsada, iyo iibiyeyaasha.
Nebbiolo wuxuu ku koray Piedmont horaantii qarnigii 14aad. Canabku wuu daahay inuu bislaado oo si sahal ah cimiladu uma xumaato; si kastaba ha ahaatee, maadaama uu sameeyo khamri cas oo aad u udgoon oo xoog badan, aad ayaa loo tixgaliyaa. Barolos waa in uu ahaado ugu yaraan saddex sano, ugu yaraan laba alwaax ah, soo saarida khamri tanic ah oo adag oo badanaa u baahan ugu yaraan shan sano si uu u jilciyo khamri adag oo dhoobo ah.
Barolo waxaa loo arkaa mid ka mid ah khamriga ugu wanaagsan Talyaaniga khubaro badan ayaa u tixgeliya inay tahay tan ugu fiican ee khamriga Talyaaniga. Qaar ka mid ah oeniphiles waxay tixraacaan Barolo oo ah Boqorka Wines iyo Khamriga Boqorrada, ilaa bartamihii qarnigii 19-aad, Piedmont waxaa lahaan jiray Aqalka sharafta leh ee Savoy, taliyayaashii taariikhiga ahaa ee waqooyi-galbeed ee Talyaaniga. Savoyyadu waxay door bideen Nebbiolo iyo Barolo DOCG waxaa ku jira 11 bulsho, oo ay ku jirto magaalada Barolo.
Waxaa jira 4200 oo hektar beercanab ah oo ku jira rafcaanka iyo tan iyo dabayaaqadii qarnigii 19-aad, beeralayda ayaa isku dayay inay aqoonsadaan beerahooda canabka ah ee ugu wanaagsan. Barolo COCG waxay u baahan tahay in khamrigu ay noqdaan 100 boqolkiiba Nebbiolo, oo ah fikirka canabka ee Pinot Noir ee Talyaaniga.
Waxa xiiso leh in la ogaado in Grinzane aanu lahayn rikoodh raadraac ah oo lagu soo saaro hal beer-canab oo gaar ah Barolos iyo inta badan midhaha waxaa loo adeegsaday Barolos isku dhafan. Khubaradu waxay ogaadeen in Nebbiolo uu awood u leeyahay inuu gudbiyo nuxurka meesha oo uu leeyahay karti aad u wanaagsan oo uu keligiis istaago. Dhammaan khamriga xaraashka ayaa lagu sifeeyay barrique, iyadoo 10-15 maalmood lagu qaatay hargaha oo leh matoorka gacanta iyo foorarsiga. Halsano malolactic ayaa ka dhacay fuustooyinka. Gabowga ayaa la saadaaliyay inay noqon doonto qiyaastii 24 bilood oo alwaax ah waxayna ku kala duwanaan doontaa iyadoo lagu saleynayo khamriga gaarka ah.
Antonio Galloni (dhaliilaha khamriga iyo madaxa Vineous) ayaa abaabulay barnaamijka New York wuxuuna abuuray NFTs (calaamadaha aan fungible) mid kasta oo ka mid ah 15 barriques, nooc ka mid ah shahaado dijital ah oo dammaanad leh blockchain. Wuxuu ku dhashay Venezuela, Galloni waxaa lagu soo bandhigay khamriga da'da aad u yar maadaama waalidkiis ay ahaayeen kuwa tafaariiqda khamriga talyaaniga ah iyo awoowgiis wuxuu jeclaa khamriga Bordeaux, Burgundy iyo Rhone. Galloni waxa uu sheekadiisii ​​ugu horreysay ku qoray Burgundy iyo Bordeaux fasalkiisa dugsiga sare ee Faransiiska.
Galloni waxa uu MBA ka helay MIT Sloan School of Management. Sannadkii 2003dii waxa uu bilaabay warside diiradda saaraya khamriga Piedmont, isaga oo keenaya in la geliyo wadarta khamriga talyaaniga midho dhal. Barolo aad buu u cajab galiyay inuu bilaabay Warbixinta Piedont (2004), waxayna noqotay hagaha koowaad ee khamriga gobolka. Galloni waxa uu noqday dhaleecayn khamriga talyaaniga u ah Robert Parker 2006 iyo 2013 wuxuu bilaabay Vinous.
Dalka Talyaaniga, xaflada waxa marti galiyay samafale, Evelina Christillin, oo madax ka ah Matxafka Aasaaska Antiquities Masar (Turin), iyo Madaxwaynihii hore ee ENIT (Guddiga Dalxiiska Dawladda Talyaaniga). Waxa ku soo biiray daadihiye xaraashka, Valeria Ciardiello, saxafi Talyaani ah iyo Cristiano De Lorenzo, Agaasimaha Christie's Italia, oo gacanta ku hayay xaraashka tooska ah.
Xaraashka waxaa hagayay guriga xaraashka ee Christie, ee ku yaal Talyaaniga… tallaabo aan caadi ahayn, ma aysan aqbalin guddiyadooda caadiga ah si ay uga faa'iideystaan ​​samafalka.
Barrique kastaa wuxuu soo bandhigay dalabka ugu yar ee 30,000 Euros, isagoo soo saaray qiyaastii 300 oo dhalo Barolo ah oo leh calaamad uu naqshadeeyay farshaxan-yaqaan Talyaani ah oo caan ah, Giuseppe Penone oo caan ku ah farshaxankiisa ballaaran ee geedaha kuwaas oo aqoonsanaya xiriirka ka dhexeeya aadanaha iyo adduunka dabiiciga ah.
Soosaarka khamriga ee munaasabadda waxaa kormeerayay Donato Lanti's ENOSIS Maraviglia Laboratory.
Guddiga Hoggaaminta Sayniska waxaa madax ka ahaa Matteo Ascheri, oo ah Madaxa Ururka Ilaalinta Barolo Barbaresco Alba Langhe Dogliani, iyada oo ka qaybqaadashada Vincenzo Gerbi, Professor Emeritus ee Jaamacadda Turin iyo Vladimiro Rambaldi, Agaasimaha Keliga ah ee Agenzia di Pollenzo, Sp. A, iyo iskaashiga cilmi-baadhaha Anna Schneider (Golaha Cilmi-baarista Qaranka-Machadka Ilaalinta Joogtada ah ee Dhirta).
Guuleystaha Barolo Barriques
Hal shirkad oo Maraykan ah ayaa ku guulaystay; Inta badan xayndaabyada waxaa iibsada kuwa wax aruuriya ee Yurub. Wadar ahaan, xaraashku waxa uu ururiyay in ka badan 600,000 oo Yuuro iyada oo saamigii gaarka ahaa uu keenay ku dhawaad ​​30,000 ilaa 50,000 Yuuro midkiiba.
Dalabka ugu sarreeya ee 140,000 Euros waxa uu xaqiijistay tonneau kaliya ee barnaamijka ku jira, bar khamri weyn oo u dhiganta ku dhawaad ​​600 dhalo oo Barolo de Commune di Grinzane Cavour 2020 kaas oo si lama filaan ah loogu daray dhamaadka xaraashka madaxweyne ku xigeenka Cassa di Risparmio Di Cuneo Foundation, Ezio Raviola.
Dalabka 50,000 Euro ee Barolo No. 10 barrique ayaa ka faa'iideystey Adas Foundation (oo aan faa'iido doon ahayn oo bixisa maareynta xanuunka, taageerada nafsaaniga ah iyo daryeelka palliative ee guriga). Sida uu qabo naqdiye Galloni, waxay ahayd "mid ka mid ah khamriga ugu xiisaha badan xaraashkan..."
Ka faa'iidaystayaasha xaraashka waxaa sidoo kale ku jiray Beerta Dhaqanka ee Alta Langa ee barnaamijyadooda dhaqameed/dalxiiska; Augusto Rancilio Foundation ee daraasadda/cilmi-baarista dhismaha, taageeridda dhalinyarada iyo soo gelitaankooda adduunka shaqada iyo dib u soo celinta dhismaha qarnigii 17aad, iyo sidoo kale hay'ad samafal oo fadhigeedu yahay Hong Kong oo taageerta agoonta iyo dhalinyarada uurka leh.
Qabanqaabiyeyaasha dhacdooyinka waxay soo jeedinayaan in Barolo En Primeur ugu horreeya (oo loo yaqaan "eber daabacaadda") ay noqon doonto naqshad mustaqbalka, iyo laga yaabee, soo-saarayaasha kale ee Barolo waxay ku biirin doonaan khamrigooda dhacdooyinka kale ee la midka ah.
mario masciullo wuxuu leeyahay,
Diisambar 5, 2021 at 12:16
Hi Juergen, maqaalkan aadka u xiisaha badan wuxuu mudan yahay in lagu faafiyo Talyaaniga.
Ma ka heli karaa ogolaansho Dr E.Garely si aan u sii wado?